Kenya iyo Ethiopia oo Qaadi Doona Xanibaada Xadka u Dhaxeeya – Rasaasa News
Dec 1, 2011 Kenya iyo Ethiopia oo Qaadi Doona Xanibaada Xadka u Dhaxeeya
Nairobi, December 1, 2011 [ras] – Ethiopia iyo Kenya oo kala saxiixay heshiis ogolaanaya in gaadiidka dadka qaada ay isaga gudbaan karaan xadka u dhaxeeya labada dal, kaas oo bilaaban doona marka la dhameeyo mashruuca dhismaha jidka, hadalkan waxaa laga soo xigtay Diriba Kuma wasiirka gaadiidka ee Ethiopia.
Ethiopia waxay ka shaqaynaysaa fidinta sidii uu gaadiidka dadka qaada isaga talaabi ahaa xadka ay la wadaagto Jabuuti iyo Suudaan ayuu sharxay wasiirku. Waxaana dhamaaday diyaarinta nuqulka heshiis dhex mari doona Waqooyiga Suudaan iyo Ethiopia, kaas oo dhamaan doona bilowga sanadka soo socda. Heshiiska waxaa ku jiri doona sharaxaad badan oo ay ka mid yihiin khidmada xadka iyo iyo calaamada baabuurta u kala gooshi doona labada dal.
Waxaa jira jid isku xidha Suudaan iyo Ethiopia oo markii ugu horaysay loo isticmaali jiray gaadiidka shidaalka. Heshiiskan cusub wuxuu macnihiisu yahay in labada wadan ay u kal gooshi karaan gaadiid badan oo qaada dadka iyo xamuulkaba riqiisna ah.
Jidkii hore loogu kala safri jiray Ethiopia iyo Jabuuti wuxuu ahaa mid ku xadaysan Busaaka qaada safarada Ethiopinaka ah ee u socdaala Jabuuti iyo jid xadiid ah oo aan aad la isugu halayn karin. Waxaa la filayaa in heshiiskan cusub uu keeni doono fursado badan oo dhinaca isu socodka labada dal
Waxaa kale oo ay Ethiopia ka shaqaynaysaa dhismaha jidadka gaadiidka ee isaga guduba sida Koonfurta Suudaan iyo Somaliland. Waxaa jiraba buu yidhi Diriba “mashruuc laba jid ah oo hada socda una dhaxeeya Ethiopia iyo Koonfurta Suudaan, iyo waliba Ethiopia iyo Somaliland oo la gabagabynayo dhanka Ethiopia.